VPN inoshanda sei uye ndeipi chaiyo yakavanzika network? Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Zvirongwa, Resources
ari VPN masevhisi ivo vanga vatove vakakosha manejimendi zviwanikwa zviri kure uye zvakachengeteka, kana kune mamwe akawanda mabasa, akadai sekuvhura zvemukati, kuvandudza zvakavanzika uchitsvaga, nezvimwe. Nekudaro, nedenda, nzira iyo vanhu vanoshanda yashanduka, kusimudzira mashandiro eterefoni uyezve kudiwa kwekuvandudza kubatana kubva kumba kuchengetedza mutero, mutengi, data rekubhengi, nezvimwe.
Kuti uwane uve nezvakanaka zvese izvi, unogona kushandisa mamwe eakawanda eVPN masevhisi aunogona kuwana, akadai seCyberGhost, NordVPN, a SurfShark VPN, ExpressVPN, Yakavanzika Internet Kuwana, Hide My Ass (HMA), IP Vanish, nezvimwewo, kudzivisa mashoma anozivikanwa kana emahara masevhisi, ayo anogona kunge asina kuchengetedzeka sezvingaite, uye ayo anowanzo shandisa data rako kuwana purofiti kubva ivo.
1 Chii chinonzi VPN?
2 Chii chinonzi VPN ye (zvishandiso)
3 Mashandiro anoita VPN
4 Zvakanakira kubatana kweVPN
5 Mhando dzeVPN
6 Maitiro ekusarudza sevhisi yakanaka
Una VPN (Virtual Private Network), kana rakazvimirira renetiweki, imhando yecrypted yekubatanidza chiteshi iyo inopa akawanda mabhenefiti. Ramba uchifunga kuti kuti ubatanidze neInternet, kubva kune chero chishandiso, ivo vanowanzo daro kuburikidza ne modem kana router inoita sechibatanidza pakati penzvimbo yako yeLAN kana chishandiso nepasi rese.
Kune zvakataurwa kubatana Kuti ibudirire, inoteedzana yezvivakwa uye maprotocol anodikanwa, pamwe nekupihwa IP kweiyo yakabatana chishandiso uyezve yekuenda IP, iyo inogona kunge iri yeiri kure server. Kana iko kubatana kwatanga, data rinodiwa rinotanga kuendeswa, asi rinoitwa nenzira isina dziviriro zvachose.
NeVPN izvo zvinogadziriswa kugadzira iyo data tunnel yeiyo kubatana, uye iyo data yakavharidzirwa. Izvi zvinogona kudzivirira kutarisa maziso kubva kune cybercriminals avo vanoda kuwana iyo data. Kuti izvi zvikwanisike, yako network network inoenderera ichienda kubva kune mutengi kifaa kuenda kumaseva eInternet Provider (IPS), asi kubva ipapo ichaenda yakananga kuseva kana maseva ebasa reVPN chibvumirano kuti asvike kwairi kuenda.
Nezvinangwa zvinoshanda, kubatana kwacho kunogona kuverengerwa kubva kuKutanga kuenda kwairi kuenda uye zvinopesana, mukuwedzera pakuve ne Yakasiyana IP inopihwa neVPN sevhisi uye kwete iyo yawanga uine IPS yako.
Chii chinonzi VPN ye (zvishandiso)
Mushure mekupfupisa izvo VPN iri mumazwi akareruka, ikozvino ndiyo nguva yekuongorora ingashandiswei iko kunyorera uye IP shanduko, ndiko kuti, kunyorera:
Telecommuting: Kana iwe wakatsvaga kune urwu rudzi rwebasa, kana madaro zvidzidzo, zvingave zvakanaka kuti iwe uve neVPN yekuchengetedza iyo data yaunobata, kungave bhizinesi, zivo pfuma yekambani yako, zvakavanzika dhata revatengi vako, vadzidzi, bhangi kana data yemutero, nhoroondo dzekurapa, nezvimwe. Nekodhi yakavharidzirwa iwe unodzivirirwa kubva pameso ekunzvera ...
Dzivisa kudzivirira- Unogona kushandisa iyo VPN kuvhura mamwe masevhisi kana kupfuura kudzvinyirira kunoiswa nemamwe masevhisi zvichienderana nenzvimbo yako. Semuenzaniso, mamwe masevhisi ekushambadzira, akadai seNetflix, anogona kuvharira akateedzana kana mabhaisikopo mune dzimwe nyika, nepo iwo achiwanikwa mune mamwe. Iwe unogona kushandisa IP yenyika iyo zvirimo zvaunoda zviripo uye nekudaro kuwana icho sosi nekunyepedzera kwauri.
Yakawedzera dura rekuchengetedzaKunyangwe iwe usingatendese telefoni, VPN inogona kukupa imwe yekuwedzera dura rekuchengeteka nedata raunoshandisa, pamwe neruzivo rwebhangi, zvinyorwa, nezvimwe. Iwe unozotodzivirira kupa dhata pane mamwe masaiti kana masevhisi uko kwavanotora ruzivo kubva kune vashandisi nekubatana. Semuenzaniso, yako ISP inokwanisa kuwana kune yako yese yekubhurawuza nhoroondo, uye ivo vanogona kushandisa iyo data kuitengesa kune vechitatu mapato, kuiongorora, kana kuziva zvaunoita nekubatana kwako, uye kunyange kuzvichengeta kwemakore. NeVPN iwe unodzivirira izvi.
Downloads: Zvakajairika kune avo vanoshandisa P2P kurodha masevhisi, Torrent, nezvimwe, shandisa VPN kuchengetedza zvavanoita, kunyanya kana zvisiri pamutemo. Zvakare, vamwe vanopa vanowanzo vharira mamwe mawebhusaiti kana kurodha pasi zverudzi urwu kuyedza kudzivirira vashandisi vavo kubva pakuvawana kana kubata nekuwandisa nekuda kwerudzi urwu rwechiito.
Nzira a VPN sevhisi Izvo zvakati wandei kana ukapinda mune zvehunyanzvi nyaya dzekuti maseva, maprotocol, nezvimwe zvinoshanda sei, asi zvichitsanangurwa nenzira yakapusa kubva pakuona kwemushandisi, zviri nyore. Chii chichaitika chichava chinotevera:
Un mutengi software Pane chako chishandiso, ingave iri TV, smartphone, piritsi, kana PC, inozoisa yakavharidzirwa dhata yekubatanidza kuitira kuti iwe ugone kutarisa zvakachengeteka, kurodha pasi kana kuita chero chaunoda. Kana iwe wagadzira iyo VPN pane iyo router, zvese zvishandiso zvakabatanidzwa kwazviri, pasina kudiwa kwevatengi software, inosvika kune yakavharidzirwa tunnel. Kana ukashandisa plugin yewebhu browser, iyo VPN inongokanganisa traffic kuburikidza nebrowser, asi kwete kubva kune mamwe mapurogiramu aunoshandisa ...
Iyo yakasimbiswa chiteshi ino pombi iyo yakavharidzirwa data uye ivo vanozobviswa neVPN server.
Kubva zvataurwa VPN server iyo data ichatumirwa kuInternet uye iwe uchagamuchira mhinduro.
Zvadaro dzoka traffic inotumirwa kwauri mushure mekufamba kuburikidza neVPN server uye kuverengerwa ipapo.
Kana ikangodzoka kwauri, iyo VPN mutengi software (kana kumisikidzwa kweiyo router neVPN) decrypt iyo data kuwana mhedzisiro yauri kutsvaga.
Zvakanakira kubatana kweVPN
Iwe unotoziva kuti sevhisi yeVPN chii uye kuti inoshanda sei, pamwe nezvazviri. Ino ndiyo nguva yekuona zvakanakira nezvisina kunaka eaya masevhisi:
Chengetedzo, kuvanzika uye kusazivikanwa: Nekushandisa yakavharirwa traffic, kupihwa iyo IP isiri yako chaiyo, uye mutemo wekusaita data logging, unogona kufamba nenzira yakatendeseka. Uye kana wako Internet mupi kana wechitatu mapato achazokwanisa kuwana yako data mune yakajeka zvinyorwa.
Chero Anwendung: inogona kushanda mune ese system kunyorera, zvisinei nekuti vanobvuma kunyorera kana kwete, nekuti zvinoshanda zvakazvimiririra, zvichinyora nzira dzakatenderera.
Easy: zviri nyore kwazvo kushandisa, mune dzakawanda zviitiko zvinokwana kubaya bhatani kuti uite kana kudzima iyo VPN panguva yako yekuzorora.
Mutengo: Kunyangwe paine mahara VPN masevhisi, iwo haana kurairwa, nekuti mamwe acho akatyorwa kana zvakaonekwa kuti vanoshandisa marekodhi edata rako kuwana rumwe rudzi rwebhenefiti. Kuti uwane sevhisi yakanaka iwe unofanirwa kubhadhara, kunyangwe ivo vasingadhure zvachose ...
Speed- Kuva nekunyorera uye kutsikisa iyo data kunodzora yako yekubatanidza kumhanya neimwe nzira. Nekudaro, kune masevhisi ayo, nekuda kwenhamba yavo huru yemaseva uye hunhu, zvinoreva kuti kumhanya uku hakuna kudzikira. Kana iwe uine Broadband, 4G, 5G kana fiber optic kubatana, hauzowona kufamba kunononoka kwakadaro.
Kune dzakawanda mhando dzeVPN, kubva pamasevhisi aunobhadhara iwe wega VPN sevhisi iwe yaunogona kuzvigadzirisa iwe, uchishandisa yekare PC, Raspberry Pi, nezvimwe. Nezve mabasa ekubhadhara, unogona kusiyanisa pakati pe:
Iine SSL: Ivo anonyanya kufadza BYOD, apo vashandi 'zvigadzirwa zvavo zvinoshandiswa kubatana kushanda kumba. Mhando iyi inoitwa kubva pane chinongedzo chehardware kuti ipe mhinduro kunoenderana neiyo SSL protocol.
Saiti saiti: inonyanya kuve yega yega yega yega yega yega yakagadzirirwa kuvanza intranets yega yega, kureva kuti, mamwe mapeji ewebhu anokwanisa kuwanikwa chete kubva kunetiweki iyi, nekudaro kudzivirira vamwe vashandisi kuwana mukana kune izvo zviwanikwa. Semuenzaniso, mayunivhesiti mazhinji anoshandisa maVPNs avo uye kuburikidza navo unogona kuwana iyo chaiyo kambasi pane yavo webhusaiti, kurodha mafaera kubva kunzvimbo yavo yekurodha yevatengi kana fakitori, nezvimwe.
Mutengi mupi: Zvakafanana nekubatanidza mudziyo wako wevatengi, senge PC yako, kune imwe kifaa pane network kana server, uchishandisa tambo. Mune mamwe mazwi, nzira yekuwana mune yakachengeteka uye yakatwasuka nzira. Hapana chikonzero chekubatana neIPP yako mupi, asi zvakananga kuburikidza neVPN.
Maitiro ekusarudza sevhisi yakanaka
Chekupedzisira, kana iwe uchifunga nezve kusarudza yakanaka VPN sevhisi, heano mamwe ehunyanzvi hunhu iwe aunofanira kuteerera:
Sarudza IP: Ini pachangu ndinofarira zvakawanda kana sevhisi yeVPN ichiita kuti iwe usarudze nzvimbo kana nyika yeIP yauchazobatana nayo. Izvi zvine zvazvakanakira pamusoro pemasevhisi ayo anokupa iwe zvisina kujairika IP. Nezve izvi iwe unogona kudzivirira Internet inodzivirira kana kuwana zviwanikwa zvinorambidzwa chete kune dzimwe nyika.
Encryption algorithm- Kusarudza sevhisi ine yakasimba encryption algorithm kwakakosha. Ruzhinji runoshandisa rakasimba giredhi remauto AES-256 kunyorera, izvo zvakanaka kwazvo kuti data rako rinyatso chengetedzwa. Panzvimbo iyoyo, mamwe maVPN anodhura kana emahara anogona kushandisa mashoma algorithms kana kuzivikanwa kunetseka.
Speed- Nekuda kuti unyore uye usimbise iyo data, izvi zvinodzora yako Internet kubatana neimwe nzira. Nekudaro, mamwe eakanakisa maVPN akagadzira matekinoroji uye akashongedzerwa nemaseva akakwana kuti akurumidze kuita izvi uye nekuchengetedza kuita kwehunhu kusvika padiki.
Privacy- Encryption haisi zvinhu zvese, mamwe masevhisi eVPN anonyora data rako, senge zita, email, ruzivo rwekubhadhara, yako chaiyo IP, nezvimwe. Zvese izvi zvinochengetwa pamaseva avo uye zvinogona kushandiswa kukuziva iwe. Kuti udzivise izvo, iwe unogona kuverenga iyo sevhisi yekutema matanda nhungamiro uye ungasarudza iwo akanyorwa seasina-matanda ane yakaoma mutemo. Uye izvi zvinoreva kuti kambani inopa iyo sevhisi yeVPN haina kupindura DMCA (Dhijitari Millenium Copyright Act) zvikumbiro kana zvirevo, izvo zvinogona kutungamira kumabhadhariro ekuputsa Mutemo weU.S. Copyright Iyi ndiyo mamiriro mune mamwe masevhisi eVPN. yakagara mu "maparadhiso epamutemo" uko zvikumbiro zvakadaro zvisingaendwi uye hunhu hwako hunochengetedzwa zvakanaka.
GUI uye kushandiswa: zvirinani zvakagadzirirwa mutengi app uye zviri nyore kushandisa, zvirinani. Mazhinji eanozivikanwa eVPN masevhisi ane akareruka maapplication, uye iwe unongoda kubaya bhatani kuti uite kana kumisa sevhisi, kana kunyanya, sarudza iyo IP nyika kana kuita nyore masisitimu. Izvo zvakakosha kuti iyo app iinewo inonzi Kill switch, ndiko kuti, basa rekumisa yako Internet kubatana kana iyo VPN ikamira kushanda, nekudaro kudzivirira kufumura data, nekuti mushandisi angafunga kuti VPN ichiri kushanda uye iri kwete zvakadaro.
Tsigiro uye mapuratifomu: Inonyanya kukosha masevhisi eVPN anosanganisira vatengi maapplication eanoshanda masystem, akadai seLinux, Windows, MacOS, Android, uye iOS. Vazhinji zvakare vane plugins kana maAddons eiyo makuru webhurawuza, akadai seMozilla Firefox neGoogle Chrome, pamwe nedzidziso dzekumisikidza sevhisi pane yako inoenderana router.
Rutsigiro rwehunyanzvi: Imwe pfungwa yakakosha, nekuti, kunyangwe zvichinyanyo shanda mushe, pamwe une imwe mhando yemubvunzo kana dambudziko raunoda kugadzirisa. Zvirinani kusarudza masevhisi nerubatsiro muSpanish, uye iwo ane 24/7 rutsigiro, kuitira kuti vagopinda kwauri chero nguva. Kana vaine chat kana maemail masystem senge nzira yekutaurirana, kana vakangopinda Chirungu hazvizove dambudziko rakawandisa, nekuti unogona kushandisa muturikiri pakutaurirana.
Nzira yekubhadhara: yega yega sevhisi yeVPN inogamuchira nzira dzakasiyana dzekubhadhara, kungave kuburikidza neGoogle Play kana neApp Store, nekadhi rechikwereti, PayPal, uye kunyangwe nedzimwe nzira senge cryptocurrencies, senge Bitcoin, yekusazivikanwa zvakanyanya.
Neruzivo urwu rwese, iwe unotova neese anodiwa data kusarudza yako inotevera VPN...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mashandiro anoita VPN
Teleportation, bheji nyowani ye AMD kuita kuti computum yakawanda inyatsoshanda